Mety hanana fampiharana "Mind" vaovao isika amin'ny watchOS 8 | Avy amin'ny mac aho
Apple dia miomana ny handefa fampiharana fiambenana vaovao telo ao anatin'ny watchOS 8, araka ny voafaritry ny hafatra navoakan'i Khaos Tian ao amin'ny Twitter. Fampiharana miaraka amin'ny Anaran'i Mind, angamba fampiharana vaovao hitantanana ny fahasalamanao ara-tsaina,. Ny iray hafa avy amin'ny Contacks ary farany ny iray avy amin'ny Council dia afaka niseho tamin'ny ora vitsy tao amin'ny WWDC androany.
Mivoaka hatrany ny tsaho manodidina ny zavatra hitantsika amin'ny WWDC atoandro. Tamin'ity indray mitoraka ity dia niresaka momba ny rindranasa vaovao izay mety haparitaka ao anatin'ny watchOS 8, ilay rafitra fiasa vaovao natao ho an'ny Apple Watch. Ny tena mahavariana dia ilay rindranasa nantsoina hoe "Mind" ary mety hitranga hanamafisana ireo tsaho efa niorenan'ny Apple fampiharana ara-pahasalamana vaovao fa amin'ity indray mitoraka ity, ny fahasalamana ara-tsaina.
Ny voalohany nahatsikaritra ireo rindranasa vaovao ireo dia ny developer Khaos Tian, izay nandefa azy tao amin'ny Twitter. Ny sary mampiseho ny mombamomba ny App Store dia mitanisa andiana marika famantarana, mifamatotra amin'ny watchOS. Anisan'ireo lisitra ireo entana vitsivitsy izay mety hanondro izay mety ho tonga amin'ny Apple Watch tsy ho ela.
Ny fahitana lehibe ao anaty lisitra dia ny "com.apple.Mind", izay fanampiny vaovao satria tsy misy Apple apps mitondra an'io lohateny io. Azo inoana fa ny Mind dia mety ho fampiharana vaovao tafiditra ao anatin'ny watchOS 8, izay afaka manome karazana fiasa mifandraika amin'ny fahasalamana ara-tsaina. Zavatra maro hafa asongadin'ity sary ity no ahitana ny "NanoTips" sy "NanoContact," izay mety hanondro ireo variana Apple Watch misy an'ny iPhone efa misy. Ity dia mety ho ampahany amin'ny fanosehana mitohy hahatonga ny Apple Watch tsy hiankina amin'ny fampiharana iPhone sy iOS mitantana sy mitantana angona momba azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Mety hanana fampiharana "Mind" vaovao isika amin'ny watchOS 8